BASELWORLD 2018 - Ukunethezeka ukuhamba nge-Transfer Service Basel -
BASELWORLD 2018 - Elula ukuhamba nge-Transfer Service Basel
Yonke insimu yaseBasel isingatha izinkampani ezingaphezu kwe-1800 ezethula i-watch yazo nezindwangu zokugqoka eBaselword. Asikho isidingo sokukhononda mayelana nenani lezivakashi kulo mkhakha obalulekile wokuhweba kwezohwebo, ngoba njengonyaka wonke, i-2017 ilindeleke ukuba imele abathengisi be-100.000 nabamele abadayisi be-World Watch ne-Jewelery Show. Ku-22 March 2018 amasango enhle azovuleka ukugeleza kwezivakashi.
Shayela kahle ku-BASELWORD - Isevisi yokuThuthukisa iBaseli
I-EuroAirport Basel yethu imaminithi embalwa ngemoto evela esikhungweni sembukiso. Kodwa ngokuqinisekile ufuna - njengabanye abahamba ngebhizinisi - ukuvakashela umbukiso womkhiqizi ngezinsuku ezimbalwa. Ngokuphindaphindiwe abagibeli bethu basitshela ukuthi izingxoxo nokuxoxisana nabakhiqizi, izimpawu ezintsha ezintsha nezinyathelo ngokusebenzisa amahholo ombukiso yizinsuku ezicindezela kakhulu ngonyaka webhizinisi lomkhakha. Yingakho sinikela ngenkonzo ekhethekile yokushayela isikhathi saseBaselworld.
Ngephakeji elikhangayo uzofika ngokunethezeka nangokuphepha kusuka ehhotela lakho noma ngqo kusuka ezindiza zaseBasel ukuya kuma-aphoyintimenti akho. Bahamba ngesitayela First Class Limousine Umklamo waseJalimane futhi akudingeki ukhathazeke ngomgwaqo osindayo noma ukupaka eshibhile esikhungweni sembukiso. Ngaphandle kokugcina isikhathi kanye nokuhlonipha abagibeli bethu, sithandwa kakhulu kubantu bebhizinisi ngoba silalela ukunakwa okukhulu phakathi nohambo.
Isevisi yokudlulisa eBasel ukubhuka okulula kwe-intanethi
Siyazi-isikhathi siyimali. Yingakho sinesinye sakho ithuluzi yokubhuka online elinempahla yasendlini. Ngesikhathi esisodwa sokuhola, sisilungele njenge-limousine yangasese kanye nomshayeli wemoto phambi kwebhokisi lakho lehhotela noma esikhumulweni sezindiza endaweni yokufika nokuhamba.
Ithimba le-Transfer Service Basel likufisela ukuhlala okuthakazelisayo e-Baselworld futhi njalo ibhizinisi elihle
Kubhalwe ku: I-Airport shuttle Baselworld Ukudluliselwa kwezindiza Ukudluliselwa kwezebhizinisi Isevisi yokudlulisa
taxi.flughafen March 16, 2017 November 18, 2017 Basel, sezindiza Shuttle, isevisi Limousine Awekho amazwana
← Isevisi yokudlulisa i-360 yehhotela e-Basel
I-BASELWORLD 2018 - Hamba ukhululekile nge-Transfer Service Basel →